आधा लाख नर्स बेरोजगार, तर प्रमुख सरकारी अस्पतालमै नर्सिङ जनशक्ति अभाव – Health Post Nepal
२०७५ फागुन १३ गते १०:०१
देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाकै विभिन्न सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्तिको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा अधिकांश अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति न्यून रहेको पाइएको छ । उपत्यकाका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा मापदण्डअनुरूप नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध छैन । यसरी देशका प्रमुख अस्पतालहरूमै आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति व्यवस्था नगरिँदा एकातिर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कमजोर बनिरहेको छ भने अकातर्फ ठूलो संख्यामा उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार बनिरहेको छ ।
यसले देशको ठूलो गलानीमा उत्पादित जनशक्तिको विदेश पलायनमा समेत सहयोग पुर्याइरहेको छ, जुन देशका लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ ।
‘सरकारी मापदण्डअनुसार अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्तिको परिपूर्ति भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जनरल बेडमा १ नर्सले ४ देखि ६ बिरामी हेर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर, वीरमा १ नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
देशकै पुरानो तथा केन्द्रीय अस्पताल वीरमा समेत नर्सिङ जनशक्ति अपुग देखिएको छ । वीर अस्पताल हाल ३ सय ८० बेडमा सञ्चालनमा छ । हाल वीरमा २ सय ७५ नर्सिङ स्टाफ कार्यरत छन् । जसमा विभिन्न तहका नर्सिङ कर्मचारी समावेश छन् । जुन बिरामीको चापअनुसार अपर्याप्त भएको वीर अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक प्रा. गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सरकारी मापदण्डअनुसार अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्तिको परिपूर्ति भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जनरल बेडमा १ नर्सले ४ देखि ६ बिरामी हेर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर, वीरमा १ नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ नर्स र बिरामीको अनुपात पटक्कै नमिलेको निरौला बताउँछिन् । उनका अनुसार बिरामीको चापअनुसार वीरमा करिब ६ सयजना नर्सिङ स्टाफको आवश्यकता छ ।
सय बेडको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा हाल विभिन्न पदमा गरी जम्मा ४९ जना नर्सको दरबन्दी छ । पछिल्लो समय अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकार र प्रकृतिमा विस्तार हुँँदै जाँदा कार्यरत नर्सिङ जनशक्ति ज्यादै अपुग भएको अस्पतालका प्रशासन अधिकृत रूपनारायण खतिवडा बताउँछन् । चिसोयाममा अस्पतालमा बिरामीको चाप कमै हुने भएकाले नर्सिङ जनशक्ति त्यति अपुग भएजस्तो महसुस नभए पनि गर्मी समयमा भने उपलब्ध जनशक्ति अपर्याप्त हुने अस्पतालकी नर्सिङ मेट्रोन कल्पलता सुब्बा बताउँछिन् । उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार अस्पतालमा अझै ६० जना नर्सको दरबन्दी अपुग छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार अस्पतालले पछिल्लो समय नयाँ प्रकृतिका विभिन्न सेवाविस्तार गर्दै आएसँगै अस्पतालमा कार्यरत नर्सिङ जनशक्ति ज्यादै न्यून भएको छ । उक्त संख्या बढाउन अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिसकेको उनी बताउँछन् ।
हेर्नुस् याे पनि
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा हाल विभिन्न पदमा गरी २ सयजना नर्स कार्यरत छन् । यहाँ भने नर्सिङ जनशक्ति आवश्यकताअनुरूप नै भएको अस्पतालले जनाएको छ । प्रसूतिगृहमा कुल नर्सिङ दरबन्दीको १० प्रतिशत मात्र नेपाल सरकारतर्फको रहने व्यवस्था छ । बाँकी ९० प्रतिशत नर्सको नियुक्ति अस्पतालकै समितिले गर्न पाउने प्रावधान छ । अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति अपुग नभएको निर्देशक जागेश्वर गौतम बताउँछन् । उपत्यकाका अन्य सरकारी अस्पतालमा कर्मचारीको अधिकांश दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फको पाइन्छ । तर, प्रसूतिगृहले आवश्यक दरबन्दी अस्पतालकै समितिबाट पूर्ति गर्ने भएकाले अस्पतालमा नर्सिङलगायत कुनै पनि पदमा जनशक्ति अभावको समस्या नरहेको निर्देशक गौतमको भनाइ छ ।
करिब ६ सय बेडमार्फत सेवा दिइरहेको पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत नर्सिङ जनशक्ति पर्याप्त छैन । प्रतिष्ठानमा हाल ४ सय ५० नर्स कार्यरत छन् । उक्त संख्या सरकारी मापदण्डअनुसार निकै कम रहेको प्रतिष्ठानकी नर्सिङ निर्देशक वैदेही वैद्य बताउँछिन् ।
त्यसैगरी, सरकारीस्तरमा एक मात्र बालअस्पतालका रूपमा रहेको कान्तिमा पनि नर्सिङ जनशक्ति अपुग देखिएको छ । ३ सय ६५ बेडक्षमताको यो विशिष्टीकृत अस्पताल जनशक्ति अभावकै कारण ३ सय ८ बेडमा सञ्चालनरत छ । अस्पतालमा नेपाल सरकारतर्फ विभिन्न तहका गरी जम्मा ८४ वटा नर्सिङ दरबन्दी भने अस्पताल विकास समितिले ५६ जना नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेको छ । सरकारी र अस्पतालको निजीस्रोतबाट गरी जम्मा १ सय ४० जना नर्सिङ स्टाफ कार्यरत छन् ।
बिरामीको चाप बढ्दै गएको तर त्यसअनुरूपको सेवाका लागि मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति नहुनाले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामै वेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ निर्देशक निवारण जोशी बताउँछिन् । उनका अनुसार कार्यरत जनशक्तिले न्यूनतम सेवा दिन पनि कठिन छ ।
करिब ६ सय बेडमार्फत सेवा दिइरहेको पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत नर्सिङ जनशक्ति पर्याप्त छैन । प्रतिष्ठानमा हाल ४ सय ५० नर्स कार्यरत छन् । उक्त संख्या सरकारी मापदण्डअनुसार निकै कम रहेको प्रतिष्ठानकी नर्सिङ निर्देशक वैदेही वैद्य बताउँछिन् । प्रभावकारी नर्सिङ सेवाप्रवाह गर्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सको संख्यालाई बढाएर १ हजारभन्दा माथि पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा हाल ६ सय १६ बेडमा सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पतालमा विभिन्न पदका गरी हाल ५ सय ५० नर्स कार्यरत छन् । यद्यपि, अस्पतालमा नर्सिङ दरबन्दी जम्मा ३ सय ५० छ । बाकीँ २ सय नर्स करारमा कार्यरत रहेको अस्पतालकी नर्सिङ निर्देशक कविता सापकोटा बताउँछिन् । ‘बिरामीको चापअनुसार नर्सिङ स्टाफको संख्या एकदमै अपर्याप्त छ । सरकारी मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिलाउन ठूलो संख्यामा नर्स थप्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनका अनुसार वार्डहरूमा भने सरकारी मापदण्डअनुसार नर्सिङ स्टाफ राख्ने तयारी अस्पतालले गरे पनि अहिलेसम्म राख्न नसकेको छैन । आइसियू वार्डमा बिरामीको हेरचाहका लागि १ बिरामीबराबर १ नर्स र पोस्टअपरेटिभ वार्डको हकमा ३ बिरामीबराबर १ नर्स हुनुपर्ने सरकारी मापदण्डअनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब ७ सय ९३ नर्सिङ स्टाफ हुनुपर्ने निर्देशक सापकोटा बताउँछिन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट नागरिक वञ्चित त भएका छन् नै, ठूलो संख्यामा सीपयुक्त प्राविधिक नर्सिङ जनशक्ति बेरोजगार बन्ने अवस्थाले विकराल रूप लिँदै छ । जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र पहिलो प्राथमिकताको विषयमा आफैँले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नगराउनुले सरकारको स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको उदासीनतालाई उजागर गर्छ ।
देशकै स्वास्थ्योपचारको केन्द्रका रूपमा रहेका राजधानी उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध नर्सिङ जनशक्तिको अध्ययन गर्दा मापदण्डअनुरूपको नर्सिङ जनशक्ति अभावले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु अहम् भूमिका खेलिरहेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । यसका कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट नागरिक वञ्चित त भएका छन् नै, ठूलो संख्यामा सीपयुक्त प्राविधिक नर्सिङ जनशक्ति बेरोजगार बन्ने अवस्थाले विकराल रूप लिँदै छ । जनस्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील र पहिलो प्राथमिकताको विषयमा आफैँले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसारको जनशक्ति उपलब्ध नगराउनुले सरकारको स्वास्थ्यक्षेत्रप्रतिको उदासीनतालाई उजागर गर्छ ।
बजारमा झन्डै आधा लाखको संख्यामा सीपयुक्त नर्सिङ जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा भौँतारिरहेको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक सेवामा समेत उपलब्ध जनशक्तिलाई अवसर नदिनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हक हनन भइरहेको छ र आफ्ना नागरिकको मौलिक हकको हननका लागि राज्य स्वयम् नै उद्यत रहेको स्पष्ट छ । स्मरण रहोस्, बेरोजगारीको मारमा पिल्सिएर पलायनका लागि बाध्य आधा लाख नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यले नै गरेको हो । उनीहरूमध्ये कतिपयको उत्पादनमा राज्य स्वयम्को लगानी परेको छ भने सबै जनशक्ति राज्यको स्वीकृतिमै तयार भएको हो ।